အလင်းရောင်ကြယ်များ: November 2012
စင်္ကာပူအမျိုးသမီး ၁၂ % သာ သူမတို့အဖော်ရဲ့ စွမ်းရည်အပေါ် ကျေနပ်ကြကြောင်း စစ်တမ်းက ဖော်ပြ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/21/2012 05:54:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တစ်ကယ့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဟာ လူတွေကို သတ်ဖျက်ပြီး သူ့ရဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စားသောက်ရန် အလို့ငှာ သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူမဟာ လူသားစားရခြင်းကို ပိုမိုခုံမင်လာခဲ့ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/21/2012 05:31:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/19/2012 03:46:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/17/2012 10:50:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရှင်စောပုဘုရင်မကြီး အသုံးပြုခဲ့သော ခေါင်းဆောင်းတော် နှင့်မြန်မာတို့၏ စက္ကောမ ယန္တရားအတတ်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/17/2012 08:45:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ယနေ့ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေသောတရုပ်နိုင်ငံအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး နိုင်ငံတစ်ကာစစ်ရေးရာ ဝါနာရှင်များဖတ်ရန်သင့် တော်ပါတယ်
စာတန်းဖတ်ရတာရှည်ပါမယ် ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းဖတ်သင့် ပါတယ်သာမာန်သတင်းဆောင်းပါးတွေထက်
စင်္ကာပူမှ လီကွမ်ယုတို့အကြောင်းလိုပဲ မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက် ပါ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုဆုပ်ကိုင်ထားသော အင်အားကြီးတရုပ်ပြည်ဟာ။။ယနေ့ တရုပ်ပြည်ဟာ လက်ရှိပထဝီ အနေထားနှင့် စီးပွားရေခြေနေ လူနေမှု့ စနစ်၊စစ်ရေးရာ၊အမေရိကန်ကို တုယှာဉ် ပြိုင်လို့ ရမရဆိုတာတာ
ရေးသားထားပါတယ် ၊နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး နိုင်ငံတစ်ကာစစ်ရေးရာ သတင်းစာဗဟုသုတ ရှားမှီးလိုသူများအတွက် အထူးသင့်လျှော်ကောင်းသော ပို စ်တစ်ခုပါ...
ဘလောက်ဂါများ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ မိကလည်း ၊ဆင့်ကဲကူးယူဝေမျှနိုင်ပါတယ်..ကိုင်းဖတ်လိုက်ကြရအောင်၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/16/2012 06:27:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/14/2012 09:38:00 am2comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အမ်မလေးဗျာအိုဘာမားပုံတဲ့ ပိုတိုရှော့ သမားတွေလက်ယာပါ
မြန်မာပြည်မလာခင် စတိုင်ပြောင်းလိုက်သော အိုဘားမား — with Shiny Moon, Aung Thu Phyo and Moe Htet.
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/13/2012 06:07:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
စွယ်စုံသုံး သတ္တု ဂယ်လီယမ်နှင့် အနာဂါတ် ကမ္ဘာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/11/2012 08:28:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရွာသူရွာသားများသည် ဝေလငါးများ၊ ငါးမန်းများ၊ လင်းပိုင်များကို အဓိက စားနပ်ရိက္ခာအဖြစ် မှီခိုစားသောက် နေကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး အချက်မှာ အဏ္ဏဝါဘုရင် ငါးမန်းကြီးများနှင့် အလွန်တရာ ကြီးမားသော ဝေလငါးကြီးများကို လာမာလီရာရှိ တံငါသည် ယောက်ျားများက မှိန်းလွတ်များဖြင့် ထိုးကာ သတ်ဖြတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/10/2012 03:45:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လူအခွင့်အရေးကို ဘန်းပြပြီး ရိုဟင်ဂျာအမည်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကို ဖဲ့ထုတ်ရန် ကြိုးစားနေကြသည်။
၁၄၀၄-ခု လေးမြို့ခေတ်၌ မင်းစောမွန် ဘုရင်လက်ထက် ရခိုင့်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကို ဗမာဘုရင်သိမ်းပိုက်သဖြင့် ရခိုင်ဘုရင် မင်းစောမွန်သည် ဘင်္ဂလားဒေသရှိ ဂေါလ်ဒေသသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။ ဂေါလ်ကကောင်း မွန်စွာ လက်ခံခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဂေါလ် ဆူလတန်ဘုရင်၏ အကူအညီဖြင့် ရခိုင်ထီးနန်းကို အရယူခဲ့ရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/09/2012 07:56:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တစ်ချိန်ကမြန်မာ့ စေတီတော်ပုံနှင့် အန်းဒိတ်ပုံများကြည့် ရအောင်
၁၉၀၃ ခုနှစ်မှ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆူးလေစေတီတော်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/09/2012 12:29:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ညကလပ် ဘီယာဆိုင်များ ၊ အနှိပ်ခန်းများအား ဖယ်ရှားပေးရန် ဈေးသူ ၊ ဈေးသားများလိုလား
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/08/2012 11:18:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒဲ့ဒိုးပြောတတ်၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အကြိုက်တွေ့ခဲ့သည့် ဦးတေဇ
ကြည်လင်သော နံနက်ခင်းတွင် ဖြစ်သည်။ ဦးတေဇသည် သူ၏တောင်ပေါ်ဒေသ ဇိမ်ခံ အိမ်ဂေဟာ ကြီး တည်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖျားဒေသ ရေခဲ နေသော ရေကန်တို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုရန် သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ်ပေါ် တက်လိုက်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/08/2012 04:38:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုက် ခြေမွသွားသော ပလောင်မြေ
ရှမ်းပြည်နယ်တနေရာကို ဖြတ်သွားသော ရေနံ နှင့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ) ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွယ်တန်း ဖောက်လုပ်နေသည့် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကြောင့် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ပလောင်တိုင်းရင်းသား ဒေသတွင် ပြည်တွင်းစစ်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်မှုများကို ဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေမှုအကြောင်း တအောင်း ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး TYSO က ယနေ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်မဲဆောက်မြို့တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရပ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/07/2012 04:47:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အိုဘားမား သမ္မတ ပုံရိပ်တစ်ခု
အိုဘားမား သမ္မတ အဖြစ်ပြန်လည်အရွေးခံရတာ ကိုကျနော်တို့ မြန်မာတွေအနေ နဲ့ လည်းပျော်ကြတာ လက်ခံကြိုဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့.. ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/07/2012 01:36:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/07/2012 01:24:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒေသခံများ ထောက်ခံမှုမရှိသောကြောင့် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လိုင်ဇာဌာနချုပ်သို့ အကူအညီတောင်း
မြစ်ကြီးနား၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ကချင်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အစိုးရအား ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ပြီး အဖျက်လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်နေသော KIA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ များအား ဒေသခံပြည်သူများမှ ထောက်ခံမှုမရှိသဖြင့် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေကြောင်း သိရပါသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/06/2012 08:47:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အသက် ၁၄ နှစ် ချစ်သူလေးများ ကြောင့် ထောင်ကိုးလ ကျတဲ့ အမျိုးသား
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတစ်ဦးဟာ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် အရွယ်မရောက်သေးသူ မိန်းကလေး ၂ ဦးနဲ့ အတူနေ ခဲ့တဲ့အတွက် တနင်္လာနေ့ ထောင် ကိုးလ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 11/05/2012 07:18:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃ဝ ကျော် EU ထောက်ပံ့မည်